Wararka - Ruiyi tire waa waajib saaran inuu la dagaallamo xaaladda faafa
Ruiyi tire waa waajib saaran inuu la dagaallamo xaaladda faafa
Sannadkii 2020, ayaa cudurka ku faafa cudurka oof-wareenka oo ku faafa waddanka oo dhan. La-dagaallanka cudurka faafa, Ruiyi tire, oo ah shirkad hormuud u ah warshadaha, ayaa si firfircoon ugu dhaqmaysay mas'uuliyadda ka saaran bulshada. Iyada oo loo marayo ficillada noocan oo kale ah sida firfircoon ee dib-u-soo-celinta wax-soo-saarka, ka caawinta la-hawlgalayaasha iyo dukaamada inay si nabad ah ugu soo noqdaan shaqadooda, iyo fulinta tababarka kahortaga cudurrada ee internetka, Ruiyi tire waxay muujisay go'aankeeda ah inay ka gudubto dhibaatooyinka iyo kalsoonida ay kaga guuleysanayso xaaladda aafada dadka oo dhan. dalka.
Ilaalinta guud ee shaqaalaha warshada si ay ugu soo laabtaan shaqada
Xilliga gaarka ah, dib-u-bilaabidda wax-soo-saarka ee habsami-u-socodka waa dhagaxa ballastiga si loo xasiliyo horumarka bulshada iyo dhaqaalaha. Ruiyi tire waxay qaadatay tallaabada ay ku qaadayso mas'uuliyadda bulshada. Iyada oo loo marayo horudhaca ah in shaqo wanaagsan laga qabto ka hortagga iyo xakameynta cudurrada faafa, Ruiyi tire wuxuu door hoggaamineed ka ciyaaray warshadaha wuxuuna si firfircoon dib ugu bilaabay shaqadii iyo wax soo saarkii. Novel coronavirus oof-wareen ayaa la sameeyay markii ugu horreysay, taasoo kooxda u horseedday inay dejiso qorshe cusub oo 24 saac ah oo looga hortagayo cudurka oof-wareenka cusub, iyo inay qaadaan tallaabooyin gaar ah sida cabbirka heerkulka iyo socodka, maaraynta cuntada ee hoolka cuntada, jeermiska goobaha dadweynaha iyo guryaha jiifka, iwm, si shaqaalaha loo siiyo jawi shaqo oo nabdoon oo laba jawaab oo sax ah looga bixiyo cudurka.
Qaadashada macaamiisha sida xarunta, adeegga dukaanka ayaa ka ammaan badan
Dukaamada Ruiyi taayirrada ayaa sidoo kale si wanaagsan uga jawaabey oo si adag u dhaqan geliyey tallaabooyinka ka hortagga cudurrada faafa, iyo ka hortagga cudurrada faafa heerarka dib u soo celinta dowladda hoose. Marka laga soo tago shaqada aasaasiga ah ee ka hortagga cudurrada sida ogaanshaha heerkulka iyo jeermiska aagga shaqada, dukaamada leh xaaladaha waxay sidoo kale fulinayaan casriyeyn adeeg, bixinta adeegga jeermiska baabuurta iyo qalabka ka hortagga cudurrada faafa ee macaamiisha imanaya dukaanka, iyagoo siinaya adeeg guri ilaa albaab iyo adeeg-guri-guri-u-qaadis iyo adeegyo gaarsiinta macaamiisha aan ku habboonayn dukaanka.
Faafinta joogtada ah ee talaabooyinka ilaalinta si loo caawiyo ka hortagga cudurka
Marka la eego xaaladda cudurka faafa, Ruiyi tire wuxuu u hoggaansamayaa ruuxda astaanta ah "horay u socoshada oo aan waligaa istaagayn", wuxuu si firfircoon u qaadaa masuuliyadda bulshada, wuxuu la wadaagayaa doon isku mid ah dadka ku nool waddanka oo dhan, wuxuuna si firfircoon uga qayb qaataa dagaalka ka dhanka ah cudurka . Taayirada Ruiyi waxay sii wadi doontaa inay fiiro gaar ah u yeelato horumarka ka hortagga iyo shaqada xakamaynta, waxay sii wadaa inay gacan ka geysato shaqada ka hortagga cudurka faafa, waxayna si adag u aaminsan tahay in faafidda laga adkaan doono aakhirka!
Gawaarida Gawaarida Gawaarida, Shiinaha PU xumbo Wheel, Shiinaha PU Wheel, Gawaarida Caster, PU Wheel, Shiinaha Mashiinka la taaban karo,